हाल को वर्ष मा सामान्य जनसंख्या बीच चामल आहार मा उछाल कारण छ। यो त विशेष, साधारण porridge छ कि जस्तो थियो। र यहाँ र त्यहाँ! चामल निकायको काम, साथै भिटामिन र खनिज को एक ठूलो संख्या पूरा गर्न आवश्यक एमिनो एसिड धेरै छन्।
उदाहरणका लागि, क्याल्सियम हड्डी, बाल र नङ बलियो बनाउँछ। पोटासियम हृदय को मांसपेशी बढावा दिन र हृदय रोगको खतरा lowers। सबै अङ्गहरू र शरीर प्रणाली पनि आयोडिन, फलाम, फस्फोरस, जस्ता र समूह बी, चामल मा निहित छन् जो भिटामिन छ लागि ठूलो मूल्य। साथै, चामल प्रोटिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण समावेश गर्छ, र - यो अन्य दानेदार गर्न यसको विपरीत, सोडियम लवण र लस समावेश गर्दैन, र यो पदार्थ एक एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा सक्षम छ।
चामल आहार toxins को सफाई मा लक्ष्य लिएको छ। वजन लागि आहार चामल porridge र अन्य उत्पादनहरु परिचय, तपाईं वजन मात्र होइन हानि, तर पनि शरीर पूर्ण सफाई प्राप्त गर्न चामल रूपमा, ब्रश जस्तै exfoliates प्रत्याभूति गर्दै, र स्वाभाविक हानिकारक पदार्थ हटाउँदछ।
प्रत्येक जो नुन सेवन को उन्मूलन समावेश चामल आहार, धेरै भिन्न छन्। हामीलाई तिनीहरूलाई जाँचौं।
भेद № 1
यो विकल्प थप एक आहार मा भन्दा एक उपवास दिन जस्तै छ। चामल उतराई पार निम्नानुसार: चामल एक गिलास, एक सानो nedovarivaya यो दिन को लागि यो वितरण र साना अंश खान तयार। एक साथ तपाईं सफा पानी चीनी, वा ताजा बिना हरियो चिया पिउन सक्नुहुन्छ।
यो आहार थप साँच्चै जस्तै आहारको, तपाईंले एक दुई सप्ताह देखि कि पालन गर्न सकिन्छ। यो कि होइन तपाईं केवल एक चामल र पानी तल धुन छ यो सबै समयमा। चावल संग समानान्तर मा फल र तरकारी खान, र एक मिठाई, फैटी र तला मा हुन आफैलाई सीमित गर्न अनुमति दिएको छ।
यो आहार embodiment रोकथाम रूपमा कार्य। एक जीवनकालमा लागि खाने को यो तरिका गोद, तपाईं सुरक्षित toxins, बेकारी र कब्जियत बारेमा भूल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि धेरै घन्टा तरल को प्रयोग नगर्न गर्न अलिकति पाकेका चामल केही spoonfuls, र त्यसपछि खाली पेट मा बिहान खान पर्याप्त छ। 2-3 घण्टा अन्त्यमा, तपाईं सामान्य आहार फर्कन सक्नुहुन्छ।
शरीर तपाईँले नुन को प्रयोग फर्कन रूपमा फिर्ता गरिएको छ जो, बाहिर आउछ थप तरल छ किनभने यो चावल आहार वजन राहत को भ्रम सिर्जना गर्ने टिप्पण लायक छ।
आहार -60 - प्रभावकारी उपकरण एक पटक र सबै को लागि वजन गर्न
वजन लागि रोटी कस्तो खान सक्छ। रोटी वजन के प्रतिस्थापन गर्न सक्छ
सबै अङ्गहरू र प्रणाली गर्न कागति लाभ
दास राज्य: शिक्षा, फारम, संरचना
रातो currant देखि वाइन
Microsoft Windows 10 को लागि कारण अनावश्यक अद्यावधिक गर्न ग्राहक गर्न $ 10,000 भुक्तानी गरेको छ
को fusel तेल देखि एक उमालेर बनाउनु कसरी सफा गर्ने? चार तरिका
घरमा रक्सी खींचना रूपमा विधि
पदक र आदेश जो पक्ष हो?
के एउटा रोचक चलचित्र हेर्न? अतिथि रेटिंग
लाभ maximization को नियम। लाभ maximization अवस्था
भूमि अधिकार अवस्थित प्रकार
शकरि: उचाई, वजन, गायकको प्यारामिटर